Ady amin’ny kolikoly :: Hotsaraina anio ireo Sinoa dimy voampanga ho nanondrana olona an-tsokosoko • AoRaha
Ady amin’ny kolikoly Hotsaraina anio ireo Sinoa dimy voampanga ho nanondrana olona an-tsokosoko
Hisantatra ny raharaham-pitsa­rana andiany fahadimy, eny amin’ny Fitsa­rana manokana misahana ny kolikoly (Pac) 67 Ha, anio ireo Sinoa dimy sy Malagasy efatra voampanga ho nanondrana olona an-tsokosoko. Antontan-taratasin’ady efa tokony notsaraina tamin’ny raharaham-pitsarana andiany fahaefatra natao tamin’ny 14 oktobra lasa teo izy ity.
Nahemotra anio ny fotoam-pitsarana noho ny tsy fahatongavan’ny mpandika tenin’ireo Sinoa teny amin’ny Pac 67 Ha tamin’ny andron’ ny fitsarana. Niantso ny fiara­ha-miasan’ny masoivohon’i Shina ireo mpitsara ao amin’ity Fitsarana manokana miady amin’ny kolikoly etsy 67 Ha ity, ka tapaka fa anio no haverina tsaraina ny raha­raha.
Ankoatra izay dia fantatra fa taratasin’ady valo hafa izay ahitana raharaha vola sandoka, fanondranana olona an-tso­kosoko ary fanodinkodinana volam-panjakana no hotsa­raina eny an-toerana. Olona telopolo mahery no voampanga amin’ireo, araka ny fampitam-baovao nomen-dRakotomahefa Mamy Tantely, Tonia mpampanoa lalàna, eny amin’ny Pac 67 Ha, omaly.
Tsiahivina fa raharaha efatra amby telopolo amin’ ireo roa amby enimpolo tokony hovitaina hatramin’ny faran’ny taona 2019 no efa voatsara. Olona miisa efatra amby telopolo no namoahan’ny Fitsarana didy fana­saziana. Tao ireo nogadraina an-tranomaizina, nisy kosa ireo voasazy hiasa an-terivozona, nisy ireo nampandoa­vina onitra sy lamandy ary nisy ireo nogadraina sady nampan­doavina onitra.
4freesex.info dit :
27/01/2020 à 03:27
Boriborintany voalohany :: Takin’ny mponina ny hanavaozana ny tsenan’ny Coum 67Ha